झापाको केर्खामा एउटा अचम्मको घ टना घ टेको छ। जहाँ श्रीमती लाई माइती पछ्य लाई खबरै नगरीकन गाद्ने क्रममा माइती पर्छ्य ले भेटेको छ। ३३ वर्षीय फुलमाया लिम्भु लाई भारत मा मा री नेपाल ल्याएको पी डित पछ्यको दाबी रहेको छ।
जानकारी त छैन छैन त्यो ला स पुर्नको लागि एक्दमै हतार गरि रहेको देखिम भन्दै सुनाउछिन।माइती पछ्य नआइकन किन छिटो पुर्न पर्यो? के थियो तेस्तो ? के कारण थियो भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छिन।
लास आजै आयेको अनि आजै पुर्न हतार गरेको माइति पछ्यको भनाइ छ। खा ल्डो समेत बनाइ सकेको र हामी आयेको था पएपछी खा ल्डो पुरेको कुरा सुनाउछिन। मृत्युु अगाडि श्रीमान ले पटक पटक कु ट्ने गरेको जानकारि मा आएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस, काठमाडौं : फाल्गुन १७ गते मंगलबार पशुपति आसपासका क्षेत्रमा सवारी निषेध गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार कालो पुल, चावहिल, मित्रपार्क, सेतो पुल, गौरी घाटबाट गौशालातर्फ जाने-आउने सवारीसाधनमा प्रवेश निषेध गरिएको छ।
यस्तै पुरानो बानेश्वर, भिमसेनगोला, सिनामंगल, तिलगंगाबाट गौशालातिर आउने सवारीलाई रोक लगाइएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा मंगलबार पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजमा आउने भक्तजन एव दर्शनार्थीको भिडलाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले ट्राफिक प्रबन्ध मिलाएको हो।
त्यसैगरी विभिन्न नाका भई भित्रिने भक्तजनको लागि छुट्टा-छुट्टै स्थानमा पार्किङको प्रबन्धसमेत मिलाएको महाशाखाले जनाएको छ।टाढा टाढाबाट भक्तजनहरु आउने हुनाले उनीहरुको सुविधाका लागि निजी तथा अन्य प्रकारका सवारी साधनहरुलाई निर्वाध आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ भने पार्किङ गर्ने स्थानहरु समेत तोकिएको छ।
महाशाखाका अनुसार भक्तजनहरूका लागि सिफल चौर, गुह्येश्वरी पारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, भण्डारखाल, तिलगंगा करिडोरमा पार्किङस्थल तोकिएको छ। आवश्यक अनुसार थप सवारीसाधन ड्राइभर्ट गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।
२०७८ फाल्गुन १७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 128 Views